Covid19 ~ Lumbini Buddhist University
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको COVID-19 संबन्धि सूचना
साबधानी अपनाऔँ आफु पनि बचौँ अरुलाई पनि बचाऔँ !!!
नेपाल सरकारले यही चैत्र ११ गतेदेखी देशलाई लकडाउन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको अपिल र सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको अनुरोध पलाना गरौँ । सकभर घर बाहिर ननिस्कौँ, नेपाल सरकारको तोकेको परिधि भित्र रहेर घर बाहिर निस्कनै परे पनि घरबाट निस्कनु अघी मास्क, पन्जा र लामो बाहुला भएको लुगा लगाउँ , कपाल राम्रो सँग बाधौँ साथै झुम्का, बाला , ब्रास्लेट, औठी जस्ता गहना नलगाउँ । सकेसम्म नगद कारोबार नगरौँ, गरेमा सकेसम्मा यथासिघ्र साबुन पानी वा सेनिटाइजरले सफा गरौँ । हात सफा नगरेसम्म अनुहारमा बिल्कुल नछोउँ । साथमा सधैं टिस्यु पेपर बोकेर हिडौँ , कुनै चिज छुनुपरेमा टिस्यु पेपरको प्रयोग गरौँ । टिस्यु पेपर प्रयोग गरिसकेपछी कुच्याएर डस्टबिनमा फालौँ । खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा कुहिनाले मुख छोपौँ । अरु व्यक्तिहरुबाट १ मिटर वा ३ फिट टाढा बसौँ । मदिरा प्युने ब्यक्तिलाई कोरोना संकर्मण हुँदैन भन्ने भ्रमक हल्लाको पछी नलागौँ र मध्यपान गर्न तत्काल छोडौँ । सुर्तिजन्य पदार्थ जस्तै चुरोट, सुर्ती, तम्बाकु, गुट्खा जस्ता पदार्थहरुले हाम्रो फोक्सोमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दछ र क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरु समेत निम्त्याउछ । कोरोना अर्थात COVID-19 बिरुद्द लड्न पनि तपाईं हामीलाई स्वस्थ फोक्सोको आवश्यकता पर्दछ तसर्थ सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तत्काल छोडौँ स्वस्थ र दिर्घ जीवन बाचौँ ।
– लुम्बिनी बौद्ध विश्वबिद्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश !
विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) बाट जारी गरिएको तथांक
COVID-19 संबन्धि विश्वविद्यालय ले जारी गरेको सुचना
आफु र आफ्ना परिवारलाई सुरक्षित राख्नका लागि युनिसेफ वा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकारी निकाय र भरपर्दो स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्ता विश्वसनीय र आधिकारिक श्रोतहरूबाट मात्र सुचना लिन र गलत र अविश्वसनीय सुचना नफैलाउन हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।
© <href=”https://www.unicef.org/nepal/ne” target=”_blank”>Unicef Nepal बाट साभारः